अहिले पेरिसडाँडामा जनवादी गीत गाउनै दिँदैनन् !
२०७६-१-५ , बिहीबार
० जनवादी गीत गाएर तपाईंले जनता ब्युँझाउने काम गर्नुभयो । तर, तपाईंका पछिल्ला गीतहरूका शब्दहरूमा विगतका भन्दा निकै भिन्न ‘जय गणेश, कृष्ण’ जस्ता भगवानका नाम आउन थालेका छन् । तपाईंको पहिचान बदलिएको हो ?
–एउटा गायकले जनवादी, पप, आधुनिक, भजन सबै गीत गाउँछ । जुन गीत गाए पनि समग्रमा ऊ एउटा कलाकार हो । त्यसैगरी म पनि एउटा कलाकार हुँ ।
० जनवादी गायनले तपाईंलाई पहिचान दियो । त्यसलाई चाहिँ किन छाड्नुभयो भन्ने मेरो प्रश्न ?
–जनवादसँग मेरो नसा–नसा गाँसिएको छ । जनवाद भनेको आमजनताले खान, लाउन पाउने समृद्धि हो । त्यसैले यसबाट बाहिर हुने कुरै भएन ।
० तर, तपाईंले जनताका ती आवाजहरू गीतमार्फत बुलन्द पार्न त छाड्नु भयो नि ?
–क्रान्तिमा मसँगै होमिनु भएका कैयन साथीहरू शहीद हुनुभयो । कति घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ । घाइते साथीहरूको अवस्था अहिले दयनीय छ । तपाईं देखिरहनु भएको छ, विगतका ती वलिदानहरूमा नेताहरूले इमान्दारिता देखाएका छैनन्, गद्दारी गरेका छन् । धोका दिएका छन् । त्यसैले अब तत्काल जनवादी गीतहरू गाउने मेरो योजना छैन ।
० धोका त नेताले दिएका हुन्, जनताले होइनन् । जनताका आवाज बोल्न छाड्दा जनतामाथि विश्वासघात गरेजस्तो हुँदैन ?
–यसको मतलब मैले जनवादी गायन छाडेँ भन्ने होइन । जनवादी गायन छाड्नु भनेको समाजबाट अलग हुनु हो भन्नेमा म प्रष्ट छु ।
० खासगरी कम्युनिस्टहरूले धर्मलाई अफिम मान्छन् । त्यही स्कुलिङबाट हुर्केको तपाईंमा यो सच्चाइ कसरी आयो ?
–माक्र्सवादी दर्शनले धर्म र जनवादलाई परस्पर विरोधी भनेको छैन । माक्र्सले पनि कहिल्यै भगवानविरुद्ध बोल्नु भएको छैन । कुरा मात्रै के हो भने माक्र्सको पालामा धर्मका नाममा शासकहरूले राज्य गरिरहेका थिए । नेपालमै पनि राजा विष्णुका अवतार हुन् भन्ने भ्रम थियो । यी उतैबाट आयातीत स्लोगन हुन् । युरोपमा धर्मका नाममा ज्यादति भएकाले माक्र्सले त्यसको मात्रै विरोध गर्नुभएको हो, भगवान र धर्मको होइन । धर्म र भगवान मान्नु फरक कुरा हो ।
० धर्म अफिम मान्ने तपाईंको विगतको स्कुलिङ गलत थियो उसो भए ?
–माओ भन्नुहुन्थ्यो–सामन्तीको बन्दुक खोसेर सामन्तीलाई नै ठोक्नुपर्छ । माओको यो मान्यतालाई गैरकम्युनिस्ट तथा पुँजीवादीहरूले अतिरञ्जित गरेर भगवान नै मान्दैनन् भन्ने दुष्प्रचार गरिदिए । कम्युनिस्ट स्कुलिङमै हुर्केका केही नेता पनि उस्तै भ्रमात्मक प्रचार गर्न रमाए ।
० नेताको भ्रमात्मक प्रचारले गलत बुझाइ रहन गयो भन्न खोज्नु भा हो ?
–१७ हजार गरीब नेपाली बाबुआमाका छोराछोरी जनयुद्धका क्रममा मारिए । तर, त्यसको साँवा, ब्याज, लाभ भने २–४ जना नेताले मात्रै पाएका छन् । ती अपराधी हुन् । यिनै अपराधी नेताहरूले हामीलाई गलत स्कुलिङ गरेर भिडाएका रहेछन् । भगवानमा आस्था राख्दा मान्छेमा दया, मायाँ, करुणा जाग्छ भनेर क्रूर बनाउन यिनले गलत स्कुलिङ गरेको सत्य हो ।
० धार्मिक गीत तथा भजनको गायन विगतका गल्तीहरूको रियलाइजेसन हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
–म सानो छँदा मेरो घरमा पूजाआजा हुन्थ्यो । त्यो मेरो संस्कार र पहिचान थियो । । त्यही संस्कार र संस्कृतिलाई मैले आज पछ्याएको हुँ । यसलाई यसरी नै बुझ्नु उचित हुन्छ ।
० धार्मिक भजनको रेकर्ड कतिवटा गर्नुभयो ?
–संस्कृत भाषामा रहेको जय गणेश... जय गणेश... भजनलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर गाएको छु । अरु भजन भने कार्यव्यस्तताका कारण रेकर्ड गर्न भ्याएको छैन । तिनलाई विस्तारै रेकर्ड गर्दै जाने योजना छ ।
० कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ त ?
–राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छु । भजन गाउन अहिले मलाई भ्याइनभ्याइ छ । अहिले तपाईंसँग कुरा गरिरहँदा पनि म मैतीदेवी मन्दिरमा छु । बालुवाटारको एउटा भागवतमा अघि मात्रै ३–४ वटा भजन गाएँ । जसरी मैले गाउने जनवादी गीतबाट उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, भजन कीर्तनमा लाग्दा पनि उत्तिकै मायाँ पाइरहेको छु । आखिर भजनकीर्तन सुन्ने पनि जनता नै त हुन् नि ?
० विगतमा तपाईंकै गीतहरू सुनेर धेरै जनयुद्धमा मर्न तथा मार्न तयार भएका थिए । अहिले त्यो विगततर्फ फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ ?
–अहो, धन्य मेरो भौतिक शरीरचाहिँ बाँचेछ । म र मजस्ता अन्य कार्यकर्ताले गल्ती गरेका थिएनौं तर अपराधी नेताहरूले हामीलाई प्रयोग गरेका थिए । यी नेता भनाउदा, कस्ता गलत मानिसहरू नेपाल र यो धर्तीमा जन्मिएछन् भनेर समीक्षा गरिरहेछु ।
० गलत बाटो हिँडियो भन्ने पश्चातापमा डुब्नु भएको छ ?
–बाटो गलत छँदै थिएन । अहिले पनि भन्छु, हाम्रो गन्तव्य सही थियो । चढेको गाडी पनि ठीक थियो । तर ड्राइभर गलत परिदियो । जानुपर्ने एकातिर थियो तर लगिदियो नसोचेको तिर ।
० राजनीतिबारेको तपाईंको पछिल्लो बुझाइबारे पनि जानौं न ?
–राजावादी, प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादी यी तीनवटा विचार बोक्ने दलहरू अहिले नेपालमा छन् । तर, यिनको गतिमति उस्तै छ । विचार फरक भएपनि तात्विकरुपमा यिनमा म खासै भिन्नता देख्दिनँ । यी सबै आपराधिक र भ्रष्ट बाटोमा अघि बढिरहेका छन् । भन्नलाई जे–जे भने पनि जनताको वास्तविक हितैषी होइनन् यी । आफ्ना कमजोरीको समीक्षा गरेर यी दल र नेताहरूले सही दिशा पक्डिउन् भन्ने मेरो चाहना छ ।
० नेताले बेइमानी गरेको कुरा गर्नुभयो । राजनीतिक आवद्धता पूर्णरुपमा त्याग्नु भएको हो ?
–माओवादी त्यागेर म डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालमा जोडिएको हुँ । पहिले त्यहाँ जोडिए पनि अहिले कमिटेड छैन ।
० किन नि ?
–राजतन्त्र, प्रजातन्त्र र साम्यवादको कुरा गर्ने नेताहरूको नियत नै खराब छ । बाबुराम भट्टराईको नियत सफा त छ तैपनि आफ्नै दुखहरू छन् । पहिलो त देशलाई समृद्धि दिनुपर्छ भन्ने बाबुरामसँग ढंग नै छैन । उनको सबैभन्दा ठूलो दुखचाहिँ प्राज्ञिक दम्भ हो । सारमा बाबुराम मान्छे लिँडे हुन् ।
० अब तपाईंको गायन यात्राबारे कुरा गरौं । गीत–संगीत क्षेत्रमा चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो ?
–नेपालीहरू रोजागारीका लागि मुग्लान जाने प्रचलन पुरानै हो । मेरो बुबा–आमा पनि रोजगारीका धुनमा भारतको कालिम्पोङस्थित एक गाउँमा पुग्नुभएको थियो । ५६ वर्षअघि त्यहीँ मेरो जन्म भयो ।
० अनि शिक्षादीक्षा नि ?
–पढाइमा म औसत थिएँ । तर, गीत–संगीतमा सानैदेखि रुचि थियो । कालिम्पोङ भारत भएपनि नेपाली भाषा नै बोलिन्थ्यो, गायिन्थ्यो । नेपाली गीत संगीत सुनेकाले मलाई सानैदेखि यसतर्फ झुकाव थियो । विस्तारै विद्यालयमा हुने कार्यक्रममा मैले गीत गाउन थालेँ । मलाई अहिले पनि सम्झना छ हरेक शुक्रबार हुने कार्यक्रममा प्रथम हुने म नै हुन्थेँ । त्यतिबेला म रेडियो नेपाल खुब सुन्थेँ । रेडियोले मलाई यतिधेरै मोहित पा¥यो कि म कालिम्पोङबाट म काठमाडौं डोहोरिएँ । ०३८ सालमा काठमाडौं आएदेखि यतै छु ।
० काठमाडौं आएपछिको यात्राचाहिँ कसरी अघि बढ्यो, बताइदिनुहोस् न ?
–सुरुमा मैले अम्बर गुरुङसँग संगीत सिकेँ । गीतारचाहिँ खिचापोखरीमा रहेको हार्मोनियम माइलाकोमा सिकेको हुँ । यही सिकाइले मलाई ०४२–४३ सालमा रेडियो नेपाल प्रवेश गरायो । त्यहाँ मैले गिटारिस्ट भएर काम गरेँ । ०४५ मा भ्वाइस टेस्ट पास भएपछि मेरो गायन यात्रा पनि सुरु भयो । ‘सल्किएको सलाइ झैं छोटो जिन्दगानी...’ मेरो पहिलो गीत हो । त्यसपछि अरु–अरु गीतहरू पनि गाउन थालेँ । ‘अरुण तरेर नाना तमोर तरेर...’ चाहिँ ०६० सालमा जन्मेको हो ।
० रेडियो नेपालको जागिरे एउटा व्यावसायिक कलाकार माओवादी आन्दोलन र जनवादी गायनमा कसरी जोडिन पुग्नु भयो ?
–रेडियो नेपालको मेरो जागिर अस्थायी थियो । अरु साथीहरू पछि स्थायी हुनुभयो । म पनि निरन्तर हुन्थेँ भने स्थायी हुन्थेँ । तर ३ वर्षजति काम गरेपछि ०४५ सालमा त्यससँगको आबद्धता त्यागिदिएँ । देशको स्वास्थ्य राजनीतिले बिग्रँदै थियो । ०४६ सालको जनआन्दोलनले यसमा केही सुधार ल्याउने अपेक्षा थियो, तर त्यसले पनि आशालाई निराशामा बदलिदियो । भ्रष्टाचार, बेथिती, गुण्डागर्दी थप मौलायो ।
यही क्रममा ०५२ सालमा माओवादीले राज्यका तमाम बेथितीविरुद्ध लड्ने उद्घोष गर्दै जनयुद्ध सुरु ग¥यो । मलाई लाग्यो–अब यसमै जोडिएर सबल राष्ट्र निर्माण गर्न लाग्नुपर्छ । त्यसपछि विभिन्न कमिटीहरूमा जोडिँदै, जनता र युद्धका गीत गाएँ ।
० यो अवधिमा कतिवटा जनवादी गीत गाउनु भयो ?
–ठ्याक्कै कति पुगे भनेर गनेको त छैन । तर करीब २ दर्जन जनवादी गीत मैले गाएको छु ।
० यी गीत गाउँदाका केही अविष्मरणीय क्षणहरू आफ्ना पाठकसमक्ष बाँडिदिनुस् न ?
–त्यस्ता अविष्मरणीय घटना त धेरै छन् । भोजपुर आक्रमणभन्दा अगाडिको घटना मेरो मनमा अहिले पनि गढेर बसेको छ । युद्धमा हाम्रा कैयन कमान्डरहरू मारिएका थिए । बाँचेकाहरूको मनोबल यसले निकै गिराएको थियो । उनीहरू निकै हतास र भयभीत थिए ।
हाम्रा कमान्डर अनन्त, मणि थापा र अनन्त हुनुहुन्थ्यो । तर, आफैंभित्र निकै अन्तरविरोध उत्पन्न भएको थियो । आफू–आफैं भिड्ने स्थिति त्यतिबेला बनेको थियो । मैले नेताहरूलाई भेटेर अन्तरविरोध हल गर्न अनुरोध गरिरहेको थिएँ । तैपनि स्थिति काबुमा आउन सकिरहेको थिएन । फागुन महिना हुनुपर्छ, वर्ष ठ्याक्कै याद भएन ।
मैले गीतार निकालेर गाउन थालेँ–अरुण तरेर नाना तमोर तरेर, आयौं हामी वीरताको गाथा कोरेर...।’ केही समयअघिसम्म हारेका र आफ्नै साथीहरूमाथि जाइलाग्न कस्सिएका साथीहरू यही गीतको डोजले ठीक ठाउँमा आउनु भयो । अझ भनौं उहाँहरू सम्हालिनुभयो । यति मात्रै होइन, लडाइँमा होमिन राजी हुनुभयो । परिणामतः हामीले भोजपुर पनि जित्यौं । यस्ता संस्मरण, स्मरण मेरा मानसपटलमा दर्जनौं छन् ।
० थाकेका हारेका, मनोबल गिरेका सिपाहीलाई युद्धमा जान उक्साए भन्नु भयो । तपाईंकै गीत सुनेर लडाइँमा भिडेकाहरू कतिको जीवनलीला समाप्त भयो होला । वर्तमानमा उभिएर त्यो विगतलाई हेर्दा बेक्कारमा मर्न र मार्न प्रेरित गरेछु जस्तो लाग्दैन ?
–मानवीय स्वभाव के हुन्छ भने उसले अरुको गल्ती देख्छ, तर आफ्नो देख्दैन । ममा पनि कमजोरी छ । छैन भन्दिनँ । तर, म यो युद्धका कमान्डरहरूले गन्तव्यमा पु¥याउनेमा त्यतिबेला विश्वस्त थिएँ । मलाई यिनले यसरी गद्दारी गर्लान् भन्ने किञ्चित लागेको थिएन । तर, भइदियो नसोचेको । यिनले क्रान्ति र समृद्धिको गाडी त्रिशूलीमा लगेर खसाइदिए । यो परिस्थिति आउँछ भनेर भविष्यवाणी गर्न नसक्नु, दूरदृष्टि ममा नहुनु मेरो कमजोरी हो ।
० जनवादी गीतहरू निकै अब्बल र राम्रा छन् । सस्ता माया–प्रेमका गीतले बजार तताइरहेका बेला जनवादी गीतहरू किन छायामा परिरहेको छ ?
–जनवादी गीत शासनसत्तासँग सम्बन्धित छ । त्यसैले सत्ताधारीहरूको सञ्चारमाध्यमहरूमा जनताका गीतले ठाउँ पाउँदैनन् । कुरो प्रष्ट छ ।
० तर, शासनमा त अहिले तपाईंहरूकै गीतका साहरामा पुगेकाहरू नै छन् नि होइन ?
–देशमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्टको सरकार छ । तर रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका साथीहरू अझै पनि जनवादी गीत भन्न डराउँछन् । हाम्रै केही साथीहरू पेरिस डाँडामा कार्यक्रम हुँदा जनवादी गीत गाउन दिँदैनन् । हाम्रा नेताले त जनवादी गीत बुझेनन् बुझेनन् कलाकारले पनि बुझेका छैनन् । कहिलेकाहीँ समाज नै ढोंगी भएकाले यस्तो भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ ।
० जनवादी गीत जनताबाट स्वीकृत भए पनि शासकबाट भएन भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
–सतप्रतिशत सत्य यही हो । जसले हामीलाई क्रान्तिमा होमे । प्रयोग गरे । उसैले नै हाम्रो गीतलाई छिः छिः र दूर दूर गरिरहेको छ । मेरो आफ्नै एउटा भोगाइ कै कुरा गरौं न । मैले नेपाल टेलिभिजनमा ‘आस्थाका स्वरहरू’ कार्यक्रम चलाउँथे । त्यसमा जनताको प्रतिनिधित्व थियो । आवाज थियो । बरु कांग्रेस, राजावादीहरूले मेरो कार्यक्रमको प्रशंसा गरे, तर माओवादी स्कुलिङबाट आएका हाम्रै नेताले चिन्दैनन् ।
० यो कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउनुमा पनि नेताहरूको हात छ कि ?
–यो कार्यक्रम मैले कन्ट्याक्टमा गरेको थिएँ । यसरी गरिएको कार्यक्रमको रिन्यू गर्नुपर्छ । तर, माधव नेपाल सरकारको पालामा मेरो कार्यक्रम रिन्यू नै गरिदिएनन् । व्यक्तिका लागि नभएर राष्ट्र र जनताका लागि मैले त्यो कार्यक्रम गरेको थिएँ । मेरो गाँस र बासको व्यवस्था त म मैतीदेवी र बानेश्वर चोकमा गीत गाएर पनि गर्न सक्छु । तर नेताहरूले कहिल्यै हाम्रो समर्पण र त्याग बुझेनन् । मात्रै भ¥याङ बनाइरहे । चाइना र भारतलाई कसरी खुसी बनाउने भन्नेबाहेकका कुरामा उनीहरूको ध्यान नै छैन ।
० अबको योजना के छ ?
–उमेरले ५६ वर्ष भएँ । बाँकी जीवन पनि गीत संगीतमै समर्पित गर्ने सोच छ । जनवादी, जागृति, सन्देशमूलकलगायतका सबैखाले गीत गाएर देश र समाजप्रति समर्पित हुनेछ ।
बम बिस्फोटमा परी पाेखरामा सेनाका जवान घाइते
विप्लवकाे नेपाल बन्द, विभिन्न जिल्लामा बम बिष्फोट र आगजनी
हाइटीबाट फर्किंदै नेपाली सुरक्षा टोली